प्रदेश – ताजा समाचार
भारतीय ट्रकसँगै पूर्वी नाकाबाट कोरोना भित्रिने त्रास
२७ चैत, झापा । जनजीवन पुरै लकडाउन र सीमा बन्द रहेका बेला काँकडभिट्टा मूलनाकाबाट भारतीय ट्रक भित्रिन थालेपछि स्थानीयवासी कोरोना भित्रिएला भनेर भयभित भएका छन् । हाल मेची भन्सार कार्यालयको परिसरभित्र लकडाउन र नाका बन्द भए यता नेपाल भित्रिएका अढाई सयभन्दा बढी भारतीय मालवाहक ट्रक पार्किङ गरेर राखिएका छन् । चालक तथा हेल्परहरु रातभरि गाडीभित्रै […]
राहत दिदै फोटोसेसन गर्ने ५ जना युवा एक रात थुनामा
चैत २६, पथरी (मोरङ) । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरापलिका वडा नम्वर ४ ले मंगलवार लकडाउनको पिडामा रहेका ज्याला मजदुरी गरि जिवीको पार्जन गर्ने आफ्ना नगरीकलाई राहत वितरण गरेको छ । राहत वितरण गर्ने क्रममा वडाअध्यक्ष गोविन्द वहादुर भण्डारीले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनको खिल्ली उडउदै हुलहुज्जतका साथ राहात वितरण गरेका थिए । […]
इलामको सामुदायिक अस्पतालको क्वारेन्टाइनमा बसेका युवक फरार
पशुपतिनगर(इलाम) चैत्र २५ । इलाम नगरपालिकाको सिंगफ्रिङ्ग स्थित डा. मेघबहादुर पराजुली सामुदायिक अस्पतालको क्वारेन्टाइनबाट एक युवा फरार भएका छन् । इलाम अस्पतालले रेफर गरेपछि चैत्र २३ गते देखि उक्त अस्पतालेको क्वारेन्टाईनमा राखिएका सन्दकपुर गाउँपालिका ३ सुलुबङ्ग घर भएका सरोज अधिकारी सोमबार रातीबाट फरार भएका हुँन । अधिकारी भारतको सिलिगुडीबाट हालै घर आएका थिए । उनलाई […]
कोेरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम हुन नदिन गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–७ ले गाउँमा आएका पाहुनालाई समेत स–सम्मान आफ्नै घर फर्काउन थालेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गठित स्थानीय प्रतिकार्य समितिले गाउँमा आएका पाहुनालाई आएकै दिन घर फर्काउने गरेको हो । समितिले सोमवार बिहान लमजुङको विचौरबाट पैदल हिँड्दै कृष्णबहादुर नेपालीको घर आएका उनका नातिलाई घर बाहिरै […]
कोरोनाको जोखिममा राहत सङ्कलन र वितरण नगर्न आग्रह
२४ चैत । पोखरा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम रहेको अवस्थामा कसैलाई पनि राहत सङ्कलन तथा वितरण नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रशासनले आइतबार साँझ सूचना प्रकाशित गरी जिल्लामा विभिन्न व्यक्ति फर्म, सङ्घ संस्था तथा नागरिक समाजलगायतले सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नगद, जिन्सी, खाद्यान्नलगायतका सामग्री सङ्कलन गर्ने प्रयास गरेको […]
उच्च ज्वरो आएपछि धुलिखेल अस्पताल आएकी महिलाको मृत्यु, स्बाव परीक्षणको लागि टेकुमा….
काभ्रे– धुलिखेल अस्पतालमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । पनौती नगरपालिका–१२ स्थित कलाती भूमिडाँडाकी अन्दाजी ४८ वर्षीया मधुमाया तामाङको मृत्यु भएको हो । मृतक तामाङलाई आज आइतबार बिहान करिब पौने ९ बजेतिर अस्पताल ल्याइएको थियो । ती महिलालाई एक्कासि पेट, टाउको दुख्ने र उच्च ज्वरो आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको हो।तर अस्पताल पुर्याउनसाथ उनलाई डाक्टरले मृत […]
विराटनगरमा लकडाउनका बेला दुई पक्षबीच झ डप, दर्जनभन्दा बढी घा इते
लकडाउनको बेला सुनसरीको दहुवी नगरपालिका-९, छातावेलीमा झडाप हुँदा दर्जनभन्दा बढी घा-इते भएका छन् । उनीहरुको सुनसरीको दुहवीका विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार भइरहेको छ । वडा नम्बर ९ मा रहेको जयबाबा इँटा उद्योग लकडाउनका बेला पनि सञ्चालनमा रहेको भन्दै बन्द गर्न प्रहरीमा खबर गरेको विषयलाई लिएर झ-डप भएको एक पक्षले जनाएको छ । अर्को पक्षले भने इँटा […]
भक्तपुरमा रहेको इँटाभट्टाको पोखरीमा डुबेर मुकेश राईको ज्यान गयो
२३ चैत । भक्तपुर : चाँगुनारायण नगरपालिका–८ सुडालमा रहेको बीएम इँटाभट्टाले बनाएको पोखरीमा डुबेर उदयपुर गाईघाट नगरपालिका–४ आमटार घर भई सोही भट्टामा काम गर्ने ३० वर्षीय मुकेश राईको गए राति निधन भएको छ । इँटा बनाउने पानी जम्मा गर्न बनाइएको पोखरीमा डुबेर ज्यान गएको भएको थाहा पाएपछि प्रहरीले पोखरीबाट श-व झिकेर परीक्षणका लागि भक्तपुर अस्पताल […]
इटहरी। इटहरीका नगरप्रमुख द्धारिकलाल चौधरीले छ महिना लकडाउन भएपनि कुनै पनि इटहरीवासीलाई भोकभोकै हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो “म इटहरीको मेयरको हैसियतले भन्छु छ महिना सम्म लकडाउन भएपनि हामी खादयान्न आपूर्ती गर्न सक्षम छौ कोही भोकै मर्ने वाला छैन ।” नगरवासीलाई भोकभोकै हुन नदिन उपमहानगर आवश्यक राहत जुटाउन लागिपरेको उहाँले वताउनुभयो […]
२२ चैत । काभ्रे (पनौती) : कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिकाले ‘फुड बैंक’ स्थापना गरेको छ । बैंकमा जम्मा भएका खाद्यान्न आजदेखि नगरका विपन्न परिवारलाई राहतस्वरुप वितरण गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरका अतिविपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन फुड बैंक स्थापना गरिएको नगरप्रमुख भीम न्यौपानेले बताउनुभयो । “पहिलो चरणको प्याकेजमा […]
२२ चैत मुस्ताङ्ग : पोखराबाट फर्किएर लोमानथाङ पुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेललाई स्थानीवासीले सात दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरे । स्थानीयवासीको उक्त आग्रहलाई अस्वीकर गरेपछि लोमानथाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल शुक्रबार नै जोमसोम फर्किनुभयो । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फलिएको कोभिड–१९को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ–५ का युवा सक्रियताका साथ लागेका छन् […]
मोरङमा शशस्त्र प्रहरी सिकारी बीच गो ली हा-नाहा-न
मोरङको सुन्दर हरैचाको जङ्गलमा शिकारी समूह र प्रहरीबीच गो-ली हानाहान भएको छ। गो-ली हानाहानपछि प्रहरीले तीन जनालाई भरुवा ब-न्दुकसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। लकडाउनको समयमा शुक्रबार सुन्दर हरैचाको लोहन्द्र केराबारी साझेदारी र सलकपुर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सशस्त्र वन रक्षक, सशस्त्र प्रहरी र शिकारीको समूहबीच गो-ली हानाहान भएको हो। शुक्रबार दिउँसो साढे ३ बजे उक्त घटना भएको […]